बन्ने होइन त अब स्मार्ट ! - Idea Studio Nepal
सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर, सोच्नुस् त, के हामी हरेक कुरामा स्मार्ट छौँ ? हामीले गरिरहेका कामहरू चुस्त, छरिताे र प्रभावकारी छन् ? सबैमा यसकाे जवाफ ‘एस’ पक्कै छैन ।